राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय पोषण अभियानको शुभारम्भ - १५ कार्तिक २०७६, NepalTimes
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय पोषण अभियानको शुभारम्भ
१५ कात्तिक, काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय पोषण अभियानको शुभारम्भ गरेकी छन् । जन्मेको छ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिका, गर्भवती आमा, प्रजनन उमेरका महिलालाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व खाद्यान्नमार्फत उपलब्ध गराउने ध्येयले बलियो नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले शुक्रबारदेखि सो अभियानको सुरुआत गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा कार्यान्वयनमा रहेको दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण कार्ययोजना (२०१८–२०२२)लाई थप सहयोग पुर्‍याउने अभियानको उद्देश्य रहेको छ । बालबालिकालाई पोषणयुक्त, स्वच्छ, पोषिलो आहार उपलब्ध गराई उनीहरुको समग्र जीवनलाई स्वस्थ्य बनाउने र बालबालिकाका अभिभावकलाई समेत आफ्ना बालबालिकालाई कस्तो आहार खुवाउनुपर्छ ? भन्ने जानकारी दिने काम अभियानले गर्नेछ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अभियानको सुरुआत गर्दै नेपालले पोषणका क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै कुपोषणका कारण हुने विविध समस्यामा उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “संविधान प्रदत्त बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउने मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्न पोषणको अभियान जोडिएको बताए । नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुन आवश्यक तत्वमध्ये पोषण पनि जाडिएको चर्चा गर्दै उहाँले सबै नागरिक सुपोषित भएमा मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने धारणा व्यक्त गरे ।
बलियो नेपालका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले सन्तुलित, सुलभ पोषण आहार सबै बालबालिका, प्रजनन उमेर समूहका महिलामा पुर्‍याउन सरकार र निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरी काम गर्न अभियान जोडिएको बताए । उनले पोषिलो खानाले मात्र स्वच्छ र स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन हुने हुँदा कुपोषणलाई अन्त्य गर्न अभियानले जोड दिने जानकारी दिँदै अभियानमा जोडिन सबैसित आग्रह गरे ।
विल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनका उप कार्यकारी निर्देशक केमल चिण्डाले बालबालिकाको पोषण अवस्थालाई सुधार ल्याउन फाउण्डेशनले सहयोग पर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गरे । सो अवसरमा अभियानका सदस्यद्वय निर्माण चौधरी र अनिलकेशरी शाहले बलियो नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे ।रासस